ဌာနချင်းမတူလို့ သူသိပ်သိမှာမဟုတ်ပေမယ့်. . . တပ်မတော်သားဘဝက. . .။
သူနဲ့အတူ အမိုးအကာတစ်ခုထဲအောက်က ရုံးတစ်ရုံးမှာ
၇ နှစ်လောက် အတူရှိနေခဲ့ဘူးတယ်။
အဲဒီတုန်းက. . .။ မှူးကြီးနဲ့အထက်အဆင့်တွေသာအပေါ် Car Park
မှာရပ်ခွင့်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့အငယ်တွေက အောက်မှာကားရပ်ပြီး
ကားလမ်းရှည်ကြီးကို သူက ကာနယ်ဖြစ်ပေမယ့် မလှမ်းမကမ်းသူ့အိမ်လေးကနေ
ကားမစီးပဲ လမ်းလျှောက်ပြီးဘဲ အမြဲတက်လေ့ရှိတာမှတ်မိနေတယ်။
အဲဒီကတည်းက နဲ့နဲ့. . နဲ့နဲ့. .နဲ့လူမမာပုံအမြဲပေါက်နေပေမယ့်
အကွဲကွဲဖြစ်ပြီးထွက်လာရင် သူ့ရုံးခန်းနဲ့ သူ့အပြုံးက
လူတွေအပေါ်သိပ်ကိုစာနာတတ်တဲ့သူ. . .။
တလောဆီက. . .။ ဧရာဝတီတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးသိမ့်သိမ့်တုန်အောင် မကြုံစဖူး
သူ့အိမ် သူ့ရွာ သူ့ကျေးရွာလေးက သူ့လိုပဲ ယဲ့ယဲ့...နဲ့နဲ့
It needs great delicacy to break the ice ဆိုတာ ဒီကာလလို့မပြောရင်
ကျွန်တော်တို့ မစာနာရင် ဘယ်သူစာနာမှာလဲ...?
သူမရှိမှ သူ့ကိုနားလည်ဂုဏ်ပြုနေကြရင် အကုန်လုံးနောက်ကျ
သူမွန်းကြပ်ရတိုင်း ချခဲ့ရတဲ့ သက်ပြင်းတွေ... အခြေအနေအရ
Copy right by Win Maung Maung
Posted by တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း at 9:00 AM
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) May 20, 2012 at 8:48 PM
မနက်ကတည်းက ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ ဒီကဗျာလေး ဖတ်မိတယ်။ နိုင်ငံအတွက် သူ အများကြီးလုပ်ပေးထားတာမို့ သူ့ကို ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်။ လေးလည်းလေးစားပါတယ်။ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း May 21, 2012 at 12:25 PM
ကျနော်တို့... ရှေ့ဆက်ကြမည့် တိုးတက်လမ်းစဉ်ကို ရှေ့ဆောင်ခဲ့သူပါ..။
အခြားလူဆိုတာ ကျနော် မပြောလိုသော်လည်း မျက်မှောက်မှာ သန်းခြောက်ဆယ်သော လူသားတွေ အသိပညာ အတက်ပညာတံခါးကို ဖွင့်ပေးနိုင်သူဖြစ်လို့ ကျနော်တို့ သိသလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ လင့်တွေချိတ်ပေးခဲ့တာ အများသိစေချင်တယ်..။
ကျနော် တိုက်ခိုက်ပြီး ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး..။ တကယ်လက်တွေ့ လုပ်နေတဲ့ သူ ဖြစ်တယ်..။